Teto Mahajanga: no nankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny zon’ny mpanjifa | Région Boeny
Fikambanana fidodoan’ny vahoaka hitaterany ireo olana ara-tsosialy isan-karazany ny Tambazotram-paritra miaro ny Zon’ny Mpanjifa eto Mahajanga. Na olana ady tany, na olan’ny mpianatra, na ny fiakaran’ny vidin’entana, dia antsoiny hatrany ny solo-tena mpiaro ny Zon’ny Mpanjifa eto an-toerana.
Tsy nisalasala araka izay ireo manampahefana eto an-toerana notarihin’ny Préfet an’i Mahajanga sy ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, nanotrona sy nandray anjara tamin’ireo hetsika rehetra nentina nanamarihana ny Andro manerantany ho an’ny Zon’ny Mpanjifa ny Alakamisy 15 Martsa 2018 teto Mahajanga. Nitarika ny fankalazana ny Filoha nasionalin’ny mpiaro ny Zon’ny mpanjifa, Atoa Rakotorova Rabetsara Lita.
Filaharana namakivaky ny tanàna, fitiliana maimaimpona ny aretina diabeta ary adi-hevitra momba “Ny fiakaran’ny vidim-bary” nifanakalozan’ireo manampahefana sy ny Tambazotra miaro ny zon’ny mpanjifa tamin’ireo fikambanana isan-karazany misy eto Mahajanga tao amin’ny Tranoben’ny Kolontsaina Mangarivotra: ireo no hetsika nanamarihana izany andro izany. Nofaranana tamin’ny lalao baolina kitra nihaonan’ny manampahefana sy ny mpikambana miaro ny zon’ny mpanjifa tao amin’ny kianja Rabemananjara.
Ankoatra ireo dia nanolotra solosaina iray vaovao ho fampitaovana ny foiben’ny Tambazotram-paritra eto Boeny eny amin’ny La Voirie Analakeky ny Lehiben’ny faritra mba ahafahana manafaingana ny fomba fiasan’izy ireo.
Mbola tsy voahaja ny zon’ny mpanjifa eto amin-tsika, efa misy ihany kosa ny ezaka hoy ny Filoha nasionaly mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Tokony hisy ny politikan’ny fanjifana eto amin’ny firenena hoy izy.
Tsiahivina fa ny taona 2015 no napetraky ny RNDC na Réseau National de Défense des Consommateurs teto Madagasikara ny lalàna mifehy ny zon’ny mpanjifa.